Fitohizan'ny hafatra : O ry RBNIR aa... Jereo tsara azany ny fampiasana n...
rhaj0 - 13/04/2018 15:12
O ry RBNIR aa... Jereo tsara azany ny fampiasana ny "nahalala" ao @ Baiboly "maontina" ao. Toa izao izany ny famakiana Baiboly, miaraka @ "code nahalala", hozy i RBNIR.
Genesisy 4:1	Ary Adama nahalala an'i Eva vadiny; dia nanan-anaka Eva...
Yeah... nahalala = nanao firaisana ara-nofo izy roaroa lehibe.. bravo RBNIR maontina!!
Mpitsara 19:25 Fa tsy nety nihaino azy ireo lehilahy ireo, ka dia nalain-dralehilahy ilay vaditsindrano ka navoakany taminy teo ala-trano; dia nahalala azy ireo ka nanao ditra taminy mandritra ny alina mandra-pahamarainan'ny andro; ary rehefa hiposaka ny masoandro, vao nalefany handeha izy.
Yeah... nahalala = nanao firaisana ara-nofo tontolo alina.. bravo RBNIR maontina!!
ISamoela 2:12	Ary ny zanakalahin'i Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalala an'i Jehovah.
Yeah... tsy nahalala = tsy nanao firaisana ara-nofo an'i Jehovah == ratsy fanahy... bravo RBNIR maontina!!
RBNIR - 13/04/2018 15:15
Dia lazao koa re ry RBNIR fa code ny hoe nakarina any an-danitra I Jesosy a. Satria tsy Lojika mihintsy ny hoe olona tsy manana elatra, tsy manana helicoptere no andeha hiakatra sy hisidina ny habakabaka.
Sady amin'izay hiakatra any anaty rahona tsy mitondra akanjo mafana sy oxygene. Tsy Lojika mihintsy fa code daholo ireo.
Code koa ny hoe Nitsangana tamin'ny maty I Jesosy satria tsy lojika mihintsy ny olona maty ho velona indray.
Ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra, ny fahagagana rehetra nataony dia nataony teo imason'ny vavolombelona maro....
Réel ny zavatra nitranga teo fa tsy iréel akory....
Ka raha misy vehivavy mitafy masoandro, moa ve tsy fahagagana izany, sa inona no idiran'ny lojika amin'izany?
Fa raha I Jesosy no mianakatra any an-danitra tsy misy raoplanina dia Fahaganana tsy roa aman-tany fa tsy lojika akory.
Mba amboary ihany rey olona ny fomba fijery sy fisainana fa Iomehezan'ny ankizy marina e
ka ilay izy afangaronao ny tena marina : ny hita ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia fahitana hitan'i Jaona (iréel)
Jesosy niakatra kosa tsy fahitana fa zavatra tena nisy (réel)...hitan'ny vavolombelona maro...
endriny - 16/04/2018 14:26
Dia lazao koa fa code re ry RBNIR ilay faminaniana nanao hoe: Indro ny virjiny hiteraka zazalahy
Fa kay izany I Maria tsy virjiny akory fa asa izay tian'ny mpaminany nolazaina tamin'izany?
Fa ianao ve mino sa tsy mino e ry RBNIR a
Tsy misy tsy hain'Atra tsy atao. Raha izay no volaza fa hitafy masoandro ny vehivavy dia vitany izany
Hamindra tendrombohitra sy manasaraka ranomasina aza vitany, sa lojika izany aminao. Hoe kapohina ny ranomasina dia misaraka. Tsy misy paompy tsy misy barazy.
Fa ity ianao mpitory ny finoana indray no toa mihambahamba araka ny voalazan'ny hira. Mino tapany
rhaj0 - 16/04/2018 16:20
RBNIR Dia ilay heviny miafina (na ny code) dia ao anaty baiboly ihany no hitadiavana azy... ny vehivahy (ilazana fiangonana) ..
Eksodosy 22:17	Aza velomina ny vehivavy manana ody.
Ka ny "fiangonanareo" sy HRnrn ve ry RBNIR io "manana ody" io??
Levitikosy 18:18	Ary aza mampakatra vehivavy ho rafin'ny rahavaviny izay mbola velona.
Ka ny "fiangonanareo" sy HRnrn ve ry RBNIR io "mampirafy ny Leglizy" io??
Levitikosy 27:4	fa raha vehivavy, dia sekely telo-polo kosa no hataonao tombany.
Dia inona no hidiran'ny 1/10-karena itangosanareo sy Hrnrn ny olona ao @ fiangonanareo ao ry RBNIR? Sekely 30??
RBNIR - 17/04/2018 11:22
Apetraho tsara aloha ny fanontaniana ianao v anisan'ireo rehetra avy amin'ny marina???? raha tsy anisany ianao dia tsy ho takatrao mihitsy ilay izy......ary dia tsy hiaino ny feony ianao ka dia ho lany andro hanazava eto fotsiny aho....
Io tahaka an'ilay hoe "nahalala" ny vadiny adama, raha avy amin'ny marina ny olona iray micomprendre avy hatrany fa tsy manisy ady hevitra satria fantany tsara fa ny teny ao anaty baiboly dia tokony ho maontina.....
Ka apetraho tsara aloha ny fanontaniana ianao ve avy amin'ny marina sa tsia????
RBNIR - 17/04/2018 12:17
Aleo azavaiko ihany sao tsy azon'i rhajo!
Raha avy amin'ny marina izao ianao dia avy dia mahafantatra fa olona no tiana lazaina ato anatin'ireto teny ireto fa tsy fiangonana...
Ity indray kosa avy dia fantatra hoe fiangonana no lazaina ato....
« [Ny amin'ilay vehivavy janga (dia Babylona), izay nitaingina ny bibi-dia nivolon-jaky] Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tamiko nanao hoe: Avia aty; dia hasehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe, izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, » (Apokalypsy 17:1)
Ka apetraho tsara hoy aho ny fanontaniana....avy amin'ny marina v ianao sa tsia alohan'ny zavatra rehetra?
rhaj0 - 17/04/2018 12:35
hi hi hi ... ilay Levitikosy dia tena hoe, vehivavy = fiangonana ry RBNIR aa.. Iana(re)o mampirafy @ fiangonana (katolika) rafivavinareo io notsipihan'ny Baiboly io.
Fa dia firo any ho'a io pejy io izany ry RBNIR aa... Izaho indray ve hanakana anao @ izany ry RBNIR
endriny - 17/04/2018 14:16
Rehefa tsy ampy finoana ianao ry RBNIR dia milaza a
Fa sarety asiana afo avy ao am-bodiny aza nisidina ny habakabaka (Kalesy afo)
varatra nirefodrefotra aza afaka nanoratra didy folo
Tsy misy Lojika izany na iray aza
Vehivavy tsy nokasihin-dehilahy aza bevohoka
Kintana aza afaka misidina mitari-dalana ka tsy mijanona raha tsy eo ambony tranon'ondry
Jesosy aza nitsangana tamin'ny maty
Jesosy aza niakatra any an-danitra tsy misy raoplanina
Seza fiandrianana aza miantona ao ambony rahona ao, misy bevolom-bava mipetraka eo amboniny.
Vavahady volamena aza misiditsidina eny amin'ny habakabaka, andrasan-dry Paoly sy Petera (Ohatran'ny satelita)
Kanefa ianao tsy mino fa tsy Lojika indray ireo fa Code.
Esy aho e e,
RBNIR - 18/04/2018 07:11
Io izao tokony hahatonga saina ny mpahay siansa ankehitriny hoe
Andriamanitra izany efa tany amin'ny 2000 taona lasa no efa nampahafantatra afaka atao tsara ny mampitondra vohoka vehivavy anankiray na dia tsy zanany aza ilay Izy (mère porteuse)
Maria ange ka mère porteuse fa tsy tompon'anaka ny tena marina e!
Ary ny mère porteuse tsy hoe izy no niconcevoire an'ilay zaza fa mitondra vohoka fotsiny ihany izy...
RBNIR - 18/04/2018 07:17
Dia raha olona misaina dia tokony hametraka fanontanina hoe ahoana ary no nahaizan'Andriamanitra izany nefa izany efa tany amin'ny 2000 taona lasa fa tsy vao hoe aingana akory....
Tahaka an'ilay hoe ahoana no nahafahan'i JEsosy nanao description exact ny scenario de destruction d'un galaxie par un trou noir???? nefa Izy efa tamin'ny 2000 taona lasa???
Dia apetrako re ny fanontaniana fa i Jesosy ange hoy aho no famantarana ho an'ny olombelona e! Avy amin'i Jesosy dia tokony ho resy lahatra ny olona amin'ny fisian'Andriamanitra...
Tsy hisy afaka hiala eo fa efa mihezaka Andriamanitra mampahafantatra ny zavatra rehetra ankehitriny....
« Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay. » (Jaona 14:8)
« Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray? » (Jaona 14:9)
Aza mitady izay tsy hitan'ny maso fa Jesosy jerena dia tokony ho hitanao ny Ray...
RBNIR - 18/04/2018 11:09
Maninona moa no avoakan'Andriamanitra izany rehetra rehetra izany ankehitriny?
Satria te hanaporofo amin'ny olona rehetra Izy fa io baiboly io dia tsy avy amin'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany....
Manamarina ity teny ity Andriamanitra...
Izao no hafatra, rehefa mihezaka Andriamanitra manazava sy manome fahalalana nefa isika miziriziry tsy mandray, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe....
rhaj0 - 18/04/2018 13:13
(1) Vehivavy tsy nokasihin-dehilahy aza bevohoka
(2) Vehivavy = fiangonana (araka ny lojika RBNIR)
(3) Lehilahy = Jesosy? sa Atra?
Donc : Ny fiangonana tsy nokasihana na tsy miaraka @ Jesosy azany mahavita azy.
endriny - 18/04/2018 14:04
Ny mpandala ny siansa ve no tokony ho tonga saina sa ianao?
Taiza no aha Lojikan'ny tamin'ny taona -1 hoe vehivavy tsy nokasin-dehilahy bevohoka.
Dia averiko indray raha mino ianao fa tanteraka izany tamin'izany? Lojika ve izany?
Dia mba diniho daholo ireo nolazaiko anao ireo fa raha mino ianao dia vitan'Atra ny hampitafy masoandro ny vehivavy.
Fa aza mino tapany, sy manao tsianjery masiso fotsiny
RBNIR - 18/04/2018 14:45
Averiko ihany ny fanazavana,
Ireo fahagagana, ireo fahalalana, ireo fahendrena rehetra nampianarin'i Jesosy dia entina hanaporofoina amin'ny olona ankehitriny ny fisian'Andriamanitra...;
Jesosy no famantarana ny amin'ny fisian'Andriamanitra...
Tsapan'Andriamanitra marina tokoa fa dia tena misy karazana olona tsy mino raha tsy misy porofo rhajo!
rhaj0 - 18/04/2018 15:14
endriny aza mino tapany, sy manao tsianjery masiso fotsiny
Toa mino ampahatelony na ampahadiminy na latsak'izany akoriny azany ry RBNIR.
REhefa "mino" dia "TSY mila manaporofo" ry RBNIR aa... inon'ar'ty.
jeux de mots sy tombatombana tsy mila porofo ary pensée mazika no fatao.
RBNIR - 18/04/2018 15:39
Ny tenin'Andriamanitra no milaza fa Jesosy no famantarana fa tsy izaho akory
RBNIR - 18/04/2018 15:53
Ny tsy fahalalan'ny olona ny tenin'Andriamanitra no mahatonga ny olona hilaza izany...fa raha ny marina ireny fahagagana ireny dia nataon'Andriamanitra mba ho porofo hitarihana ny olona hino....
« Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny. » (Matio 11:21)
« Lozanao, ry Korazina! lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenona. » (Lioka 10:13)
Ny asa lehibe voalaza eo dia ireo fahagagana lehibe nataon'i Jesosy.....ary ny tanjona araka ireo teny ireo dia mba "hinoan'ny olona Azy ka hibebahan'ny olona...
rhaj0 - 18/04/2018 15:55
yep... toa itony ataonao itony no fatao rehefa "mino" ry RBNIR aa...
(1) Ny tenin'Andriamanitra no milaza fa Jesosy no famantarana (lojikan-dRBNIR)
(2) Atra = Jesosy (lojikan-dRBNIR)
Donc : Ny Tenin'i Jesosy no milaza fa Jesosy no famantarana.
Tsy mila manontani-tena @ lojika hoe, aiza koa ny fitombenan'izany hoe, "Jesosy manamarina Jesosy izany", fa tonga dia inoy fotisny.
endriny - 19/04/2018 11:15
Ireo fahagagana, ...
Ka raha nanoratra tany aminao Atra fa: "Hisy vehivavy mitafy masoandro"
Dia maninona no tsy inoanao fa lazainao fa code. Kanefa, moa tsy izany ve no ho fahagagana lehibe.
Ny kintana an'apitrisany aza mbola hiraraka eto an-tany ho famantarana, ka tsy misy olona na dia iray ho faty akory amin'izany, fa samy hibanjina an'io famantarana io daholo ny ambany lanitra.
Ka ho ahy dia tsy misy Lojika mihintsy ny zavatra lazainao
endriny - 24/04/2018 15:53
Dia inona indray izany ny code manaraka
Herinirina = Herim-pamonjena = Jesosy niverina